ဆိုက်ယူနစ် အကြောင်း နားလည် သဘောပေါက်ရန်
အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ ဆိုက်ယူနစ် အကြောင်း နားလည် သဘောပေါက်ရန်
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စရေးဇီယွန်ဝါဒီ ၏ ဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟု အိမ်ရှေ့ တွင် အစ္စရေး ပြည်သူများ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြနေသည် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း အား ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကို မထိန်းနိုင် သည့် အတွက် ရာထူး မှ နှုတ်ထွက်ပေးကြရန် တောင်းဆို ဆန္ဒ ပြနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဇီယွန် ဝါဒီ ပြည်သူများ နှင့် စစ်သားများ မှ ပါလက်စတိုင်း လယ်သမား များ အပေါ် အနိုင်ကျင့် ။ ။ photos
စကျတငျဘာ ၁၉, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ နာပ်လက်စ် တောင်ပိုင်း ရှိ ရွာလေးတစ်ရွာ အနီး အစ္စရေး ဇီယွန် ဝါဒီ ပြည်သူများ နှင့် စစ်သားများ မှ ပါလက်စတိုင်း လယ်သမား များ အပေါ် အနိုင်ကျင့် နေသည့် ပုံရိပ် အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါလက်စတိုင်းလယ်သမားများ ပိုင်မြေ ကို မတရား သိမ်းယူပြီး လယ်မြေ များ ကို မီး ရှို့ ပျက်စီး ခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေး (ဇီယွန်ဝါဒီ ) နှင့် ယူအေအီး ၊ ဘာရိန်း ပုံမှန်ဆက်ဆံရေး အားကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ၊ ဝါရှင်တန် ။ ။photos
စကျတငျဘာ ၁၈, ၂၀၂၀ - ၁၀:၃၅ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ အမေရိကန် နိုင်ငံ ဝါရှင်တန် မြို့ တွင် အစ္စရေး (ဇီယွန်ဝါဒီ ) နှင့် ယူအေအီး ၊ ဘာရိန်း ပုံမှန်ဆက်ဆံရေး အား ရှုတ်ချ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ပြီး ပါလက်စတိုင်းများ ကို ထောက်ခံ ခဲ့ ကြပါတယ်။
အဘူဒါဘီ တွင် ပထမဆုံး အစ္စရေး (ဇီယွန်ဝါဒီ ) စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်
စကျတငျဘာ ၅, ၂၀၂၀ - ၁၁:၅၉ ညနေ
ဇီယွန်ဝါဒီ အစ္စရေး အစိုးရနှင့် အတူ ယူအေအီး(အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ) တို့ ၏ နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူ ပုံမှန် ဆက်ဆံရေး သဘောတူ ပြီးနောက် အဘူဒါဘီ တွင် ပထမဆုံး အစ္စရေး (ဇီယွန်ဝါဒီ ) စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ် လိုက်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အမေရိကန် ရဲများပမာ ဇီယွန် (အစ္စရေး) စစ်တပ် သည်လည်း ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးများ ၏ လည်ပင်းများ ကို ဒူးနှင့်ထောက်၍ ညှစ်ခြင်းကို စတင်ကြလေပြီး + ဓာတ်ပုံများ
စကျတငျဘာ ၃, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၄ ညနေ
ဇီယွန်ဝါဒီ အစ္စရေး စစ်တပ်သည် အသက် ၆၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ပါလက်စတိုင်း အဖိုးအို အား ဖမ်းဆီး၍ ၎င်း ၏ လည်ပင်းအား မိမိ၏ ဒူးနှင့်ထောက်ပြီး ညှစ်ခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးတွင် ဂျူးဘုရားကျောင်း၊ အရက်ဘားအဖြစ် အပြောင်းခံထားရသည့် ဗလီ အများအပြား ရှိနေ
ဇူလိုငျ ၃၀, ၂၀၂၀ - ၁၁:၃၇ ညနေ
အစ္စရေးမှာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် အနည်းဆုံး ၇၀ ကျော်လောက် ဖျက်ဆီးခံရတာ၊ ဂျူးဘုရားကျောင်း၊ စားသာက်ဆိုင်၊ အရက်ဘား၊ ကပွဲရုံတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲခံခဲ့ရတယ်လို့ မကြာသေးခင်က စစ်တမ်းတစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဇီယွန် (အစ္စရေး) ဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟု အိမ်ရှေ့ တွင် သပိတ်မှောက်မှု ဆက်လက် ဖြစ်ပွား ။ ။ photos
ဇူလိုငျ ၂၆, ၂၀၂၀ - ၈:၃၆ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ ညနေခင်းပိုင်းတွင် ဇီယွန် (အစ္စရေး) ဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟု အိမ်ရှေ့ တွင် သပိတ်မှောက်သူ ၄ထောင်ကျော် ခန့် ရှိခဲ့ပြီး သပိတ်မှောက် သူများ မှ လူထု ကို ဖြိုခွဲ ပြီး ၅၅ ဦး အား ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ သောကြာနေ့ မနက် ပိုင်းတွင်လည်း သပိတ်မှောက်သူမှာ ၁ထောင် ခန့် ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ကိုရိုနာ ရောဂါကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း မတားဆီးပေး နိုင်သည့် အတွက် နေတန်ယာဟု အား ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက် ပေးရန် သပိတ်မှောက် တောင်းဆို ခဲ့ကြ ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သပိတ်မှောက်မှု မှာ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား နေကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ဇီယွန် (အစ္စရေး) ဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟု အိမ်ရှေ့ တွင် သပိတ်မှောက်သူ ၅၅ ဦး အဖမ်း ခံရ ။ ။ photos
ဇူလိုငျ ၂၅, ၂၀၂၀ - ၁:၄၇ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့ ညနေခင်းပိုင်းတွင် ဇီယွန် (အစ္စရေး) ဝန်ကြီးချုပ် နေတန်ယာဟု အိမ်ရှေ့ တွင် သပိတ်မှောက်သူ ၄ထောင်ကျော် ခန့် ရှိခဲ့ပြီး သပိတ်မှောက် သူများ မှ လူထု ကို ဖြိုခွဲ ပြီး ၅၅ ဦး အား ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ သောကြာနေ့ မနက် ပိုင်းတွင်လည်း သပိတ်မှောက်သူမှာ ၁ထောင်ခန့် ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ကိုရိုနာ ရောဂါကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း မတားဆီးပေး နိုင်သည့် အတွက် နေတန်ယာဟု အား ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက် ပေးရန် သပိတ်မှောက် တောင်းဆို ခဲ့ကြ ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဇီယွန် ဝါဒီများ မှ ပါလက်စတိုင်းရှိ အစ္စလာမ် အထိမ်းအမှတ်များ ကို ဖျက်စီး ။ ။ photos
ဇူလိုငျ ၃, ၂၀၂၀ - ၆:၄၃ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ အစ္စရေး အစိုးရ (ဇီယွန် ဝါဒီများ) မှ မိမိတို့ မတရား ကျူးကျော်ထားသည့် ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံ ရှိ အစ္စလာမ် အထိမ်းအမှတ်များ ကို ဖျက်စီး နေကြသည့် ပုံရိပ် အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွဒ်စ် အရှေ့ ပိုင်းရှိ ပါလက်စတိုင်းအိမ် တစ်လုံး အား ဇီယွန် ဝါဒီ စစ်တပ်များ ဖျက် စီး ။ ။ photos
ဇှနျ ၂၅, ၂၀၂၀ - ၇:၀၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ကွဒ်စ် အရှေ့ ပိုင်းရှိ ပါလက်စတိုင်းအိမ် တစ်လုံး အား ကလေး ၄ ယောက် ရှိပြီး ခွင့်ပြုချက်မရိဘဲ ဆောက်ထားသည်ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြစ် ဇီယွန် ဝါဒီ စစ်တပ်များ ဖျက် စီးခဲ့ကြပါတယ်။ ဇီယွန်ဝါဒီ (အစ္စရေး များ ) သည် သူတစ်ပါး အိမ် (ပါလက်စတိုင်း)ကို လည်း ကျူးကျော် အနိုင်ကျင့် ပြီး နေရာလုနေတယ် ။ ဗိုလ်ကျပြီး အိမ်ရှင်ကိုလည်း အကြောင်းပြ မောင်းထုတ်တယ် ။
ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ ဇီယွန် အစိုးရ မှ ယာဖာမြို့ရှိ မွတ်စလင်မ် သင်္ချိုင်း အား ဖျက်စီး မှု အတွက် ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက် ။ ။photos
ဇှနျ ၁၄, ၂၀၂၀ - ၁၀:၀၇ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ ဇီယွန် အစိုးရ မှ ဒုက္ခသည်များအတွက် နေရာစရာ ဆောက်ပေးရန်ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် မိမိတို့ ကျူးကျော်ထားသည့် ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံ ယာဖာမြို့ရှိ မွတ်စလင်မ် သင်္ချိုင်း အား ဖျက်စီး ခဲ့သည့် အတွက် ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက် ခဲ့ကြပါတယ်။
ဆိုက်ယူနစ် များ နှင့် ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံသားများ ပဋိပက္ခ။ ။ photos
ဖဖေျောဝါရီ ၂၇, ၂၀၂၀ - ၁၂:၀၁ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ ဆိုက်ယူနစ် (ဇီယွန်) ဝါဒီ အစ္စရေး စစ်သား များ နှင့် ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံသားများ ပဋိပက္ခ မြင်ကွင်းအချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇီယွန်စစ် တပ် မှ ဂါဇာ မြို့ အား ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက် ။ ။ photos
ဖဖေျောဝါရီ ၂၄, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၄ ညနေ
ဇီယွန် ဝါဒီ အစ္စရေး စစ်တပ် မှ ဂါဇာ မြို့ ရှိ ပါလက်စတိုင်း ခုံကာကွယ်ရေး စခန်းများ အား ဗုံးကြဲ တိုက်ခိုက် ခဲ့သည့် ပုံရိပ်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် နှင့်အစ္စရေး တို့ ၏ ((ဤရာစုနှစ် အတွင်း အကောင်းဆုံး သဘောတူ မှု )) ဆိုသည့် အစီအစဉ် အား အမေရိကန် သံရုံး ရှေ့ တွင် ဆန္ဒပြ ၊လန
ဖဖေျောဝါရီ ၂, ၂၀၂၀ - ၁၁:၄၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အမေရိကန် သမ္မတ ထရန့် နှင့် အစ္စရေး ဝန်ကြီးတို့ပေါင်း၍ ပါလက်စတိုင်းတို့အား လက်ဝါးကြီးအုပ်နိုင်ရန် ကြံပြီး ရေးဆွဲထားသည့် ((ဤရာစုနှစ် အတွင်း အကောင်းဆုံး သဘောတူ မှု )) ဆိုသည့် အစီအစဉ် အား ရာပေါင်းများစွာသော် လူထု ကြီးမှ လန်ဒန်မြို့ ရှိ အမေရိကန် သံရုံး ရှေ့ တွင် ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ပါလက်စတိုင်းများကို အစ္စရေးက တမင်ရည်ရွယ် ညှင်းပမ်းနေသည်ဟု ကုလအကြီးအကဲဟောင်း ပြော
ဇနျနဝါရီ ၂၀, ၂၀၂၀ - ၁၁:၃၇ ညနေ
အစ္စရေးရဲ့ ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုအောက်မှာ နေထိုင်နေရတဲ့ ပါလက်စတိုင်းတွေရဲ့ အခြေအနေဟာ ဖော်မပြနိုင်လောက်အောင် စက်ဆုပ်ဆိုးရွားဖွယ် ဖြစ်နေတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟောင်း အန်ဒရူး ဂီလ်မူရ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
စကျတငျဘာ ၂၈, ၂၀၁၉ - ၅:၅၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့ ပိုင်မြေ အား မတရားသိမ်းပိုက်ထားသည့် ဇီယွန် ဝါဒီများကို ၇၆ ကြိမ်မြောက် သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဇီယွန်များမှလည်း လက်နက်အားကိုး၍ မတရား နိုင်နင်းခဲ့ရာ ၁ဦး ရှဟီးဒ် ဖြစ်ပြီး ၆၈ ဦး ဒဏ်ရာ ရခဲ့ပါတယ်။
ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးများ မှ အမေရိကန် သမ္မတ ၏ တရားမဝင် ဆုံး ဖြတ်ချက်ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ၊ photos
ဒီဇငျဘာ ၉, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အမေရိကန် သမ္မတ ထရန့် အနေဖြင့် ကွတ်ဒ်စ် မြို့ အား အစ္စရေးတို့၏ မြို့တော်အဖြစ် တရား မဝင် သတ်မှတ် ပြောဆိုခဲ့မှု အပေါ် ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးများ မှ မစ္စ်ဂျစ်ဒ် အလ်အက်ဆွာ အတွင်း စုပေါင်း ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြဆို ခဲ့ကြပါတယ်။
ကွတ်ဒ်စ် မြို့ အား အစ္စရေး တို့ ၏ မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ်မှုကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ၊ ယီမင် ၊ photos
အဗ်နာ ။ ။ ယီမင် နိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ကွတ်ဒ်စ် မြို့ အား အစ္စရေးတို့ ၏ မြို့တော်အဖြစ် အမေရိကန် သမ္မတ ၏ မတရား သတ်မှတ် မှု အပေါ် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြပါတယ် ။
ကွတ်ဒ်စ် မြို့ အား အစ္စရေး တို့ ၏ မြို့တော်အဖြစ် သတ်မှတ် မှုကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ၊ ကရ်ှမီး၊ photos
ဒီဇငျဘာ ၉, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၄ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကရ်ှမီး ပြည်နယ်ရှိ စရီးနဂဲရ် မြို့သူမြို့သားများ အနေဖြင့် ပါလက်စတိုင်း နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် ကွတ်ဒ်စ် မြို့ အား အစ္စရေးတို့၏ မြို့တော်အဖြစ် အမေရိကန် သမ္မတ ၏ မတရား သတ်မှတ် မှု အပေါ် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြပါတယ် ။
အချို့အာရပ်အစ္စလာမ် နိုင်ငံများ ၏ အနေဖြင့် မိတ်ဆွေ နှင့်ရန်သူ ကို မခွဲခြား တတ်ပေ / ဗဲဟ်ရာမ် ကာစေမီ
မတျ ၂၉, ၂၀၁၇ - ၁၁:၁၈ ညနေ
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတ နိုင်ငံ ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဗဲဟ်ရာမ် ကာစေမီ အနေဖြင့် အာရပ် အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များကျင်းပသည့် အစည်းအဝေး ၏ ပိတ်ပွဲ ကို ဝမ်းနည်းကြောင်း နှင့် ဝေဖန် ရှုံ့ချ ထိုက် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Netanyahu ၏ ဝါရှင်တန်ခရီးစဉ်ကို ဂျူးလူမျိုးများ မှ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ / photos
ဖဖေျောဝါရီ ၁၆, ၂၀၁၇ - ၁၁:၅၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဇီယွန်ဝါဒီ (ဆိုက်ယူနစ်ဝါဒီ ) ခေါင်းဆောင် Netanyahu ၏ ဝါရှင် တန်ခရီးစဉ်ကို ဂျူးလူမျိုးများ မှ သမ္မတ အိမ်တော် အိမ်ဖြူတော် ရှေ့ တွင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ ခဲ့ကြပါတယ်။
ဇီယွန် ဝါဒီ အစ္စရေး နှင့် ဆော်ဒီ ဘာများ ကွာ ခြားနေပါသလဲ ? /photos
မတျ ၁၅, ၂၀၁၆ - ၉:၁၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဇီယွန် ဝါဒီ အစ္စရေး နှင့် ဆော်ဒီ ဘာများ ကွာ ခြားနေပါသလဲ ? ဆိုတာကို အောက်ဖော်ပြ ဓာတ်ပုံမှ သက်သေ ပြနေပါတယ်။
ဘန်ကီမွန်းကို အကြမ်းဖက်အားပေးသူဟု ကိုလိုနီ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် စွပ်စွဲ
ဇနျနဝါရီ ၂၇, ၂၀၁၆ - ၁၁:၄၈ ညနေ
ကိုလိုနီ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် နာသန်ရာဟုက ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကို အကြမ်းဖက်အားပေးသူလို့ ဇန်န၀ါရီ ၂၆ ရက်နေ့က စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဇီယွန် ဝါဒီ စစ်သား များနှင့် ပါလက်စတိုင်း ပြည်သူလူထု ပဋိပက္ခ / ဓာတ်ပုံများ
နိုဝငျဘာ ၁၃, ၂၀၁၅ - ၁၀:၀၃ ညနေ
42 ရက်မြောက်ဇီယွန် ဝါဒီ ((ဆိုက်ယူနစ်ဝါဒီစစ်သား) ) များနှင့်ပါလက်စတိုင်းပြည်သူ များ၏ ပဋိပက္ခ ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
အလ္လာဟ် အိမ်တော် ၂ခု စလုံးကို ဘယ်သူတွေ အုပ်စိုးနေလဲ ?
နိုဝငျဘာ ၁၀, ၂၀၁၅ - ၃:၃၇ နံနကျ
အလ္လာဟ် အိမ်တော် ၂ခု စလုံးကို ဘယ်သူတွေ အုပ်စိုးနေလဲ ကို အောက် ပါ ဓာတ်ပုံလေးက ထင်ရှားစွာ ဖော်ပြနေပါတယ်။ အုပ်စု ၂ဖွဲ့စလုံးကတော့ မွတ်စလင်မ်များ ကို အထူးသဖြင့် ရှီအာ မွတ်စလင်မ်များ ကို အစားမကျေတဲ့အဖွဲ့ ၂ဖွဲ့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ၂ဖွဲ့ ကတော့ ဆိုယူနစ်နဲ့ ဆော်ဒီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မတရားလုပ်နေသည့် အစ္စရေး ဇီယွန်ဝါဒီများ (ဆိုက်ယူနစ်ဝါဒီများ) ကိုတော်လှန်မည့်ပါလက်စတိုင်း လူငယ်များ / ဓာတ်ပုံ သတင်း
ဩဂုတျ ၃၁, ၂၀၁၅ - ၁၁:၃၄ ညနေ
အဖိနှိပ်ခံ ပါလက်စတိုင်း များ မတရားလုပ်နေသည့် အစ္စရေး ဇီယွန်ဝါဒီများ (ဆိုက်ယူနစ်ဝါဒီများ) ကိုတော်လှန်မည့်ပါလက်စတိုင်း လူငယ်များ ၏ ပုံရိပ် အချို့  ဖြစ်ပါသည်။
အဖိနှိပ်ခံ ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးတစ်ချို့ နှင့် ဖိနှိပ်နေသူ အစ္စရေး ဇီယွန်ဝါဒီများ (ဆိုက်ယူနစ်ဝါဒီများ) / ဓာတ်ပုံ သတင်း
ဧပွီ ၂၅, ၂၀၁၅ - ၇:၁၂ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ အဖိနှိပ်ခံ ပါလက်စတိုင်း လူမျိုးတစ်ချို့ နှင့် ဖိနှိပ်နေသူ အစ္စရေး ဇီယွန်ဝါဒီများ (ဆိုက်ယူနစ်ဝါဒီများ) တို့ ၏ ဘက်နက် အင်အား အပြတ်အသတ် ကွာခြားမှုပြ ပုံရိပ် တစ်ချို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဇနျနဝါရီ ၂၅, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဆိုက်ယူနစ် ဝါဒီများ၏ ရည်ရွယ်ချက် မှန်းတိုင်ပြ ကာတွန်း
ဇနျနဝါရီ ၂၃, ၂၀၁၄ - ၁၂:၀၀ နံနကျ